Nepal Mamila | जसपाका दुवै पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै, होला मेलमिलाप ? - Nepal Mamila जसपाका दुवै पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै, होला मेलमिलाप ? - Nepal Mamila
जसपाका दुवै पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै, होला मेलमिलाप ?
काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुवै पक्षलाई आन्तरिक मेलमिलापका लागि आज (मंगलबार) बोलाएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।